Video Joiner u Mac: Sida loo soo biir Videos ee Mac
Top Video 5 Joiner u Mac: Sida loo soo biir Videos ee Mac
Mararka qaar waxaad kaliya toogtay ama la qabtay dhowr clips filim ama video oo doonaya in ay ku soo biiraan si ay u noqonayaan isku mar ciyaaray kartaa Mac. Sidee baad u dhaqmaysaa in? Waxaan soo koobay kor ugu sareysa 5 video joiners ugu wanaagsan ee Mac.
Qeybta 1: 5 Top Video Joiners u Mac
Qeybta 2: Sida loo soo biir Videos on Mac
1. Video Joiner u Mac
Video Joiner u Mac bixisaa sahlan oo dhakhso ah file video ku biiro aad Mac, in qoyaysas badan oo sida la filayo. Waxay leedahay interface fiican, waxay bixisaa fudud ah si ay u isticmaalaan aalada iyo howlgalka si dhakhso ah, jiididda iyo hoos u videos ah, iyaga kala soocaan si guji uu iyaga ku biiro. Waxay bixisaa kala duwan ee waafaqsan file iyo tiro ka mid ah qaababka kale tafatirka laakiin aanu ku xanuunsado ma ay xog ka duwan qaar ka mid ah baakadaha ee suuqa, iyo xajisto fudud ah si ay u fahmaan aalada iyo wax soo saarka si degdeg ah.
Malaha user ugu halkan saaxiibtinimo qaab ay u dhigma, gabal weyn ee software.
Tani waxaa markii hore loogu talagalay Linux iyo UNI- si Mac ah. Waxaa ka shaqeeya si aad u wanaagsan in kastoo, inkasta oo ay wax yar ka dhiman marka loo eego user interface, engine xagga dambe ka gaad waa qalooc lahayn, processing si degdeg ah oo badan oo qaab waafaqsan sidoo kale. Tani waxay sidoo kale ka mid ah dhawr qaababka kale ee tafatirka, laakiin ka duwan software hore, interface halkan way ka yara oxaha sababta oo ah waxa ka mid ah oo sidii oo kale laga yaabaa inay tahay habboon loogu emore th soo maray video tifaftirayaasha.
Yar la safeeyey marka la barbar dhigo kuwa kale, oo ku habboon in ay khibrad ah, laakiin waxa ay si fiican u shaqaynayaan si kastaba ha ahaatee.
Xirmo fiican kale oo ka mid ah qalabka kale ee yar iyo sidoo kale. Waxaa hubaal ah xirmo raadinaya fiican, inkasta oo aanay ahayn sida ugu dhakhsaha badan qaar ka mid ah oo aanu overcomplicate dhinacyada qaar ka mid ah geeddi-socodka. Waxa ka mid ah taageerada ay u hayaan qaar ka mid ah qaabab video ah u gargaarka ay ka shaqeynayaan laakiin aalada ah waa wax yar oo gaabis ka badan qaar ka mid ah halkan, si kastaba ha ahaatee waxaa guud ahaan waa xirmo fiican in la isticmaalo oo u muuqda qayb ka mid ah.
Software Nice, ka shaqaysa OK, in kastoo ay jiraan fursado fiican halkan.
Barnaamij raad aad u yar yar oo ku biiray files video, waxa ay leedahay kala duwan oo dheeraad ah oo kooban oo qaab waafaqsan, laakiinse iyada aawadeed xawaare. Waxaa ka shaqeeya weyn Mac oo waa mid aad u fudud in ay isticmaalaan.
Interface waa wax yar oo aasaasi ah, laakiin in uu la nooca minimalist ee alaabta oo dhan si ay u noqoto si caddaalad ah, oo dhan si fiican u shaqaynayaan. Waa xadidan oo ah qaabab ay u inkasta oo ay taageertaa, oo si daran u horjoogsadeen in ay faaiidada, laakiin haddii faylasha aad shaqeeyaan waxa ku jira, markaa waa xirmo qiimo.
Xirmo A weyn yar in aad si deg deg ah u shaqeeyo, xataa haddii ay u muuqato wax yar oo aasaasi ah oo uu leeyahay taageero qaab xaddidan.
Kani waa barnaamij la jecel yar in wada samayn kartaa tricks kale oo dhowr ah iyo sidoo kale ku biiro video files, laakiin taasu waxay interface nadiif ah iyo smart oo soo saartaa natiijada si dhakhso ah. Si ka duwan qaar ka mid ah halkan waa wax yar ka dhib badan in ay howlgal laakiin sifooyinka dheeraad ah la joogo sida jarida iyo xitaa ciyaaryahan video dhamaystiran, in ay noqon kartaa xoogaa la fahmi karo.
Baakad ah muuqaalada yar ka badan inta badan, laakiin yimaado iyadoo dheeraad ah iyada oo sababtu tahay.
Qeybta 2: Sida loo soo biir Videos ee Mac
Waa hagaag, weligii ma ahan howl weyn haddii aad leedahay fudud oo wax ku ool ah Mac video joiner - Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) . Tani qalab video tafatirka waxay bixisaa qaab fudud oo ay isku biiri aad videos iyo sidoo kale siisaa qalab badan oo kaa caawinaya in aad xaalkaa filimada siyaabo badan oo kala duwan. Download Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) hadda iyo ka baro sida si ay ugu biiraan videos ee Mac adigoo raacaya tilmaan-fudud oo tallaabo-tallaabo hoos ku qoran. (Talo: Haddii aad tahay qof user Windows ah, riix halkan si aad u hubiso ka baxay sida loogu biiro videos in Windows )
1 Dooro faylasha aad rabto in aad
Download this video Mac joiner iyo abuurtaan barnaamijka. Dooranaysaa files bartilmaameed ka browser warbaahinta iyo si toos ah jiidi-n-daadiyaa iyaga track video ah. Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Video Rikoodh" iyo sida loo isticmaalo dhisay-in iSight si ay u qoraan qaar ka mid ah video clip inuu ku biiro.
2 Jiid-n-hoos u Your Videos in Timeline ah
Markaas waxa ay qaadataa kaliya labo ka mid ah qasabno in uu ku biiro faylasha: saaray dhammaan faylasha ee degaanka ka shaqeeya oo la beddelo si aad rabto in la xidhiidhiyo.
3 dar-guur (Ikhtiyaar)
Hadda waxaad ku dari kartaa kala guurka iminka u dhexeeya clip ee kasta. Dooro mid ka mid ah ay ka ee dhammaan jajabkii, ku dar kala guurka ah kala duwan jab kasta oo gacanta ama dooro kala guurka random. Si tan loo sameeyo, u tag menu-guur ee xaq sare, ka dibna jiidi-n-soo daadiyaa meel gaarka ah aad rabto in aad u dhexeeya kasta oo laba video Goosimo. Markaas laba jibaar guji kala guurka la doortay ee degaanka shaqada iyo waqtiga dhigay.
4 badbaadi Video Edited ah
Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, riix "Dhoofinta" ka dibna uu ka soo xusho Lahjadaha kuwan: badbaadiyo video qaab aad dooratay, geliyaan si ay u YouTube, gubi in DVD ama beddelid u arkaysid ee telefoonka gacanta ama kiniin.
Wax macno ah ma in video jajabkii biiray jira qaabab kala duwan ama ma, file ka dhalanaya waa la badbaadin doonaa sida qaabka aad doorato (waxaad dooran kartaa qaab video kasta, oo ay ku jiraan MOV, M4V, AVI, MP4, wmv, FLV iyo HD ). Dooranaysaa wax soo saarka loo baahan yahay horena uu furmo suuqa oo guji "Abuur". Dhowr ilbiriqsi ka dib, file badbaadi doona iyo folder ay ku jiraan video ku biiray furi doonaa si toos ah.
Sida loo soo biir / Isku dar / midowdo TS Files
Jidadkiisa oo dhammu waa in lagu soo qabto / download / badbaadiyo YouTube videos
20 Motion Videos gaabis Waxaad doonaysaa in Watch
Sida loo sameeyo Video Album a on Facebook
Sida loo geliyaan True 16: 9 YouTube Video
Sida loo Beddelaan iyo Guba BitComet / FrostWire Movies in DVD
> Resource > Video > Video Joiner u Mac: Sida loo soo biir Videos ee Mac